Andeha hanao izay mahafaly an’i Jesôsy (Zef. 3:17)
Efa nisy olona nanontany anao ve hoe: “nanao ahoana ny tontolo andronao?” “Nandeha tsara ve ny zava-drehetra androany?” Ahoana moa raha mametraka ireo fanontaniana ireo amin’Andriamanitra ianao? “Andriamanitra ô! Nanao ahoana ny tontolo andronao?” Inona no heverinao ho valinteniny? Hiteny izao Izy angamba: “Mafy tokoa ny tontolo androko androany. Nitomany aho noho ny amin’ny toeran’ireo mpitsoa-ponenana an’arivony feno zaza mangatsiaka sy noana ary mitomany. Nandeha teny amin’ny araben’ny tanàna feno mponina eto amin’izao tontolo izao aho, ary niara-nitomany tamin’ireo tsy manan-kialofana sy mahantra. Vaky ny foko noho ny amin’ireo vehivavy iharan’ny herisetra sy ireo zaza raiki-tahotra hamidy ho amin’ny fanandevozana ara-pilan-dratsy. Nahita ny fandravan’ny ady Aho, ny vokatra mahatsiravin’ny loza eo amin’ny zavaboary sy ny fangirifiriana fatratra noho ny aretina mandemy sy mahafaty”. Rehefa izay dia hanontany ianao hoe: “Andriamanitra ô! Misy zavatra mety hampifaly Anao ve? Inona no hitondra fifaliana ho an’ny fonao? Mety misy zavatra hampihira Anao ve?”
Vakio ny Lio. 15:4-32. Ahoana no iafaran’ireo tantara ireo? Inona no ambaran’izany mikasika an’Andriamanitra?
Feno hafaliana ny lanitra manontolo rehefa misy mpanota mibebaka. Eny tokoa, monina eto amin’ny tany feno aretina sy horohoron-tany, tondra-drano ary fahafatesana isika; kanefa mameno hafaliana ny fon’Andriamanitra isika rehefa mizara ny filazantsara amin’ny hafa. Iray amin’ireo antony manosika hizara ny fitiavan’i Kristy ny fahafantarana fa mitondra hafaliana ho an’ny fon’Andriamanitra ny fijoroana ho vavolombelona. Mihira ny lanitra manontolo isaky ny manambara ny amin’ny fitiavany isika.
Vakio ny Zef. 3:17. Inona no ataon’Andriamanitra rehefa mandray ny fahasoavany mahavonjy isika?
Alaivo sary an-tsaina izao: mandray an’i Jesôsy ho Mpamonjy ny tenany manokana ny lehilahy na vehivavy iray noho ny amin’ny fijoroanao ho vavolombelona. Faly i Jesôsy; mihoby amin’ny hiram-pifaliana ny lanitra manontolo, ary mifaly noho ny amin’izany olona izany amin’ny fihirana ny Mpamonjy mahery. Inona moa no mahafinaritra sy mahafaly mihoatra noho ny fahafantarana fa ny fijoroanao ho vavolombelona dia mahafaly ny fon’Andriamanitra eto amin’ity tontolo feno alahelo ity?